I-Whatagraph: Yenza amaNgcaciso amaNgcono avela kuGoogle Analytics | Martech Zone
Masijongane nayo, uGoogle Analytics ngumngcipheko kwishishini eliphakathi. Iingcali ezichitha ixesha elininzi eqongeni, yinto ebonakalayo kwaye yomelele kubahlalutyi iqonga esiliqhelileyo nesinokulicoca kwaye sinciphise ukufumana impendulo kuwo nawuphi na umbuzo esinokuba nawo. Njengearhente, asililo ishishini eliqhelekileyo kodwa ke sinemicimbi yokuhambisa idatha ngamanye amaxesha.
Abathengi bethu-nkqu nabathengi bobuchwephesha- bayaqhubeka nokusokola ekuphumezeni nasekulinganiseni kubahlalutyi ukuya kwinqanaba apho bekhululekile ukwenza intengiso enolwazi kunye nezigqibo zeshishini ngokusekwe kwiziphumo. Ngeso sizathu, sinyanzele abathengi bethu ukuba bangene ekungeneni kuGoogle Analytics, ukuthumela iingxelo ezizenzekelayo okanye nokwakha iideshibhodi ezenziwe ngokwezifiso. Endaweni yoko, sixhomekeke kwiinkqubo ezenzekelayo ezivelisa iingxelo ngokujonga ngokulula kubathengi bethu.
Inqaku ithatha inyathelo eliya phambili, ukwakha idatha yeGoogle Analytics ukuba intle ngezantsi ezi paginated kwaye zinokujongwa ngesikhangeli okanye zihanjiswe ngePDF. Bhalisa, yongeza iakhawunti yakho kaGoogle yokuHlola, khetha ipropathi yakho, kwaye ngokukhawuleza uyasebenza.
Iziphumo zikhawuleza, kunye nembonakalo yento nganye kubahlalutyi metric, kubandakanya:
Mihla le, ngeveki, ngenyanga okanye unyaka ukuza kuthi ga ngoku ngeengxelo xa kuthelekiswa nexesha lonyaka ophelileyo
Inani labatyeleli lilonke, emini, kubandakanya idatha yokundwendwela entsha xa ithelekiswa nokubuya
Iiseshoni zizonke, ixesha leseshini eliphakathi kunye nenqanaba lokuhlawula
Ukujonga iphepha elipheleleyo, ukujonga iphepha ngeseshoni, kunye neseshoni ngumkhangeli
Iselfowuni, ithebhulethi kunye neeseshoni zedesktop
Imithombo yezithuthi kunye nokhangelo, lwentlalo, ngqo kunye neminye imithombo ephezulu eqhekeziwe
Iiseshini ngelizwe nakwisixeko
Iinguqulelo zePro kunye neArhente zibonelela ngolwazi olongezelelekileyo, kubandakanya:
Amaphepha ahambayo anyukayo kwiimbono kunye nokuhla kweembono
Iinjongo ezigqityiweyo, ixabiso kunye nenqanaba lokuguqula
Amaphepha anezinga lokunyuka kakhulu, elona nqanaba liphezulu lokuhlawula, kunye nenani lokuphuma
Iitshaneli ezinokunyuka okuphezulu kwezithuthi, ukwehla okuphezulu kwezithuthi, ukonyuka okuphezulu kwinqanaba lokuhla, kunye nelona phuculo liphucukileyo
Amaphepha aphezulu kunye namaxesha abo okulayisha
Olona phendlo ludumileyo ngaphakathi
Izixhobo ezinokubangela imicimbi kuba zinenqanaba eliphezulu kakhulu lokubhabha
i-analytics infographic "ububanzi =" 640 ″ ukuphakama = "2364 ″ />
Ukuba utyikitya njengearhente, ungade ubhale nelebheli yemveliso, ukongeza isikimu sakho sombala kunye nelogo.
Ungasayinela i-Whatagraph kwisilingo sasimahla emva koko uhlaziye emva kweentsuku ezili-14 ukuya kwinguqulelo oyikhethileyo.
Olona nyuselo ndingathanda ukulibona kwiqonga elinje kukukwazi ukucacisa icandelo endaweni yokuthumela yonke idatha. Uhlalutyo lukaGoogle lunengxaki enkulu nge ugqithiselo logaxekile, ke amanani asezantsi anokubanjiswa kakhulu kwiipropathi ezinamanani amancinci ezithuthi.
tags: iingxelo zonyaka zohlalutyoiingxelo ezizenzekelayoixesha leseshoni eliphakathiizinga lokuhlawulaiiseshoni zesikhangeliinqanaba lotshintshoiingxelo zohlalutyo zemihla ngemihlaukubalwa kweendwendwe mihla leubalo lokuphumaiarhente yohlalutyo lukaGoogleamajelo ohlalutyo kuGoogleIinjongo zohlalutyo lukaGoogleUhlalutyo lwe-infographicUhlalutyo lwamaphepha ahamba phambili kuGooglekwi-infographicuphendlo lwangaphakathiidatha entsha yeendwendwe ezibuyayoukujonga iphephaiiseshoni zokuhlalutya zizonkeInani labatyeleli lilonkeimithombo yezithuthiiingxelo zohlalutyo zeveki nganye
Epreli 6, 2016 ngo-10: 05 AM
'Inqwelwana' encinci, umzekelo xa ukhuphela ingxelo kwiPDF kukho imizobo ethile elahlekileyo ehambisa iinxalenye ze-infographic engenamsebenzi
Epreli 6, 2016 ngo-11: 15 PM
Ndinomdla-andikhange ndingene kuzo naziphi na iingxaki apho, uBarry. Ndiyazibuza ukuba ingaba babenexesha lokuphumla.
Epreli 7, 2016 ngo-5: 38 AM
UBarry, enkosi ngempendulo yakho! Njengoko uDouglas watsho, besiphucula inkqubo. Ngoku yonke into isebenza ngokupheleleyo. Ukuba usajongana neengxaki ezithile, vele usishiyele umgca malunga nazo!
Onke ngxeng (@ngxangxangx)
Epreli 13, 2016 ngo-12: 18 PM
Kwangena njengoncedo olukhulu okoko inkonzo efanayo ngokubonakalayo iyekile ukusebenza emva kokuthatha kwabo